Challenge The Good News Paper - Kufamba nokutenda (Shona)
Elifas Chituku tries out his new prosthetic leg.
"Ndagara ndakasuruvara uye nokusada kuva panevamwe. Kuregerera ndo kwanyaya kundinetsa-ndanga ndakuvenga chero vana vadiki vainditarisa", ndo zvinorangarirwa naElifas.
Kwapera makore maviri apo aizvigezera hake murwizi, mumwe murume akamuudza nezva Jesu, hupenyu, kufa, kumuka kuvafi uye nokuti Jesu ndiye aigona kumusunungura Elifas kubva kuzviri nemitoro yake.
Elifas anoti "Ndakachema usiku hwose uye ndakabvuma kuti ndaiva mutadzi. Ndakanga ndisingazive kwaiva Jesu uye anondida nenzira yandaive. Ndakazadzwa nemufaro ndikatanga kugamuchira vamwe uye nokufara muupenyu".
Ndaisaziva kuti ndaizovawo nomufaro zvakare kana kurarama sevamwe, asi Jesu akashandura hupenyu hwangu!". Jesu hupenyu hwangu.
Elifas anorangarira kuti panguva iyoyo zvipatara zvemu Zimbabwe zvaisapa madondoro okufambisa, anoti "kubva gore ra 1977 kusvika 1985 ndakanga ndisina madondoro okufambisa ndaitoita zvokudaukadanka seshiri kana ndichifamba asi nhasi ndinoti ko ndimbori aniwo hangu ndingachengeta godo mumoyo? Mugore ra 1986 mukoma wangu aiva mudzidzise akanditengera madondoro emiti ipapo kufamba kwakava nyore"
Zvadaro umwewo Chiremba wechichena akatengera Elifas madondoro esimbi, ayo achiro kushandisa nanhasi, uyewo mugore ra 1994 mumwewo mutendi we chichema akatengera Elifas gumbo rokupfekera.
Zvisineyi mushore nemakore gumi, gumbo riya rakaguka, Elifas akarasikirwa netariro. Asi Elifas akarangarira kuti Jesu akavimbisa kuti aizopa vateveri vake zvavanoda sezvavanopa chero shiri dzedenga nemarava (Mateo 6:25-27).
Panguva iya Elifas akanga ava Mufundisi uye ava nomudzimai nevanasikana vatatu. Ndipo pakaenda kungungo rokubatsira vafundisi vemuZimbabwe rakaitirwa ku Chiredzi richitungamirwa neboka reMuti Ministries.
Pagungano iri umwewo mufundisi anonzi Bartholomew akavimbisa kutengera Elifas rimwe gumbo rokupfekera raiva kuSouth Africa ipo Elifas pakagova rwendo rwehupenyu hwake neChallenge News.
"Nyasha dza Mwari dzripo nguva dzose kundichengeta "anodaro Elifas. " Ndinotenda mufundisi Bartholomew nokundiratidza rudo chairwo. Ndirikuona kubata kwaMwari. Mitoro yangu yose inobviswa naJesu Kristu.
Hakuna mumwe anopa rusununguko kunze kwa Jesu. Hakunazve mumwe anoregerera zviri kunze kwake. Ramangwana rangu riri muna Kristu uye rakajeka kupfura zuro.•
<< Loop deur geloof (Afrikaans)